Izinsizakalo Zokubonisana - I-Shang Hai Tongke Flow Technology Co, Ltd.
Iseluleko se-TKFLO sempumelelo yakho
I-TKFLO ikhona ukweluleka amakhasimende ayo kuyo yonke imibuzo ephathelene namaphampu, ama-valve nensizakalo. Kusuka eselulekweni sokukhetha umkhiqizo olungele izidingo zakho kukhetho olubanzi lwepompo ne-valve.
Silungele wena - hhayi kuphela uma kukhulunywa ngokukhetha umkhiqizo omusha ofanele, kodwa futhi nakuwo wonke umjikelezo wempilo yamaphampu nezinhlelo zakho. izingxenye zokunikezwa kwezimpahla, izeluleko ngokulungiswa noma ukulungiswa kabusha, nokulungiswa kwamandla kwephrojekthi.
Insizakalo yokubonisana nezobuchwepheshe yeTKFLO inikeza izixazululo ngazinye ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwamaphampu, ama-valve neminye imishini ejikelezayo. Lapho wenza kanjalo, i-TKFLO ihlala ibheka uhlelo lonke. Izinhloso ezintathu eziyinhloko: ukulungisa kanye / noma nokwenza ngcono izinhlelo ngokuhambisana nezimo ezishintshayo, ukufeza ukonga amandla nokwengeza impilo yensiza yemishini ejikelezayo yazo zonke izindlela.
Ngokucabangela uhlelo lonke, onjiniyela be-TKFLO balwela njalo ukuthola isisombululo esonga kakhulu. Kusukela ekulungisweni kokusebenzisa izinto ezakhiwe ngokukhethekile, ukufaka kabusha amasistimu wejubane eguquguqukayo noma ukufaka umshini esikhundleni, sisebenza ngokubambisana nekhasimende ukuthuthukisa izixazululo ngazinye. Bahlonza indlela engcono yokuvumelanisa amasistimu nezimo eziguqukayo, kungaba endaweni yezobuchwepheshe noma ushintsho kumthetho.
Ukubonisana ngezobuchwepheshe: ncika kokuhlangenwe nakho nasekwazini
Insizakalo yokubonisana nezobuchwepheshe yeTKFLO yamaphampu neminye imishini ejikelezayo inezinhloso ezintathu:
B. Ukonga amandla
C. Impilo yesevisi ende yemishini ejikelezayo yanoma iyiphi indlela
1. Ukuqinisekisa ukubonisana kwamakhasimende okuphelele, ochwepheshe bezinsizakalo ze-TKFLO basebenzisa ulwazi kuyo yonke iminyango yezobuchwepheshe be-TKFLO, kusukela ku-Engineering kuya ku-Production.
2. Ukulungiswa kwejubane ukufeza ukulawula okuphezulu kwepompo ngezidingo ezihlukile zohlelo
3. Ukuguqulwa kohlelo lwe-hydraulic, ngokwesibonelo, ngokufaka izinto ezintsha zokuphehla udoti nezihlukanisi
4. Ukusetshenziswa kwezinto ezenziwe ngokukhethekile ukunciphisa ukugqoka
5. Ukulinganisa izinzwa zokushisa nokudlidliza ukuqapha ukusebenza nesimo - uma kucelwa, idatha nayo ingadluliselwa kude
6. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe besizinda esisezingeni eliphezulu (okugcotshwe ngomkhiqizo) impilo yenkonzo ende
7. Izindwangu zokuthuthukisa ukusebenza kahle
8. Izinzuzo zokubonisana ngobuchwepheshe kwamaphampu neminye imishini ejikelezayo
9. Ukonga amandla ngokuthuthukisa ukusebenza kahle
10. Ukunciphisa ukukhishwa kwe-CO2 ngokwandisa uhlelo
11. Ukuphepha nokwethembeka ngokuqapha kanye nokuhlonza okungahambelani ekuqaleni
12. Yonga izindleko ngempilo yesevisi ende
13. Izixazululo ze-Bespoke zezidingo nezidingo ngazinye
14. Iseluleko sochwepheshe esuselwa ekwazini komkhiqizi
15. Imininingwane yokwandisa ukusebenza kahle kwamandla kwezinhlelo.